Manambara ny fiarahantsika amin’ny Reuters · Global Voices teny Malagasy
Manambara ny fiarahantsika amin'ny Reuters
Voadika ny 11 Oktobra 2018 2:30 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Oktobra 2009 ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy)
Faly izahay manambara ny fifamatorana misy eo amin'ny Global Voices sy ny orinasam-pampitam-baovao iraisam-pirenena, Reuters. Nanohana ny Global Voices hatramin'ny faran'ny taona lasa teo ny Reuters, raha nampiantrano ny fihaonantsika isan-taona tao amin'ny foiben-toerany maneran-tany ao Canary Wharf any Londra.
Nanambara fanampiana lehibe ho an'ny Foibe Berkman momba ny Aterineto sy ny Fiarahamonina ao amin'ny Sekolin'ny Lalàna ao Harvard, toerana misy ny Global Voices (tamin'izany fotoana) ny Reuters omaly. Ity fanampiana ity dia ahafahantsika manakarama an'i Rachel Rawlins, tonian-dahatsoratry ny fitantanana, mba hanohy hanohana ny ekipantsika miavaka ahitana ireo tonian-dahatsoratry ny faritra ary hitondra ireo mpandika teny mba hanome fitantarana tsara kokoa amin'ny votoaty amin'ny fiteny tahaka ny Arabo sy ny Rosiana. Ny fanohanana avy amin'ny Reuters no ahafahantsika manao fanentanana sy fampiofanana bebe kokoa any amin'ny faritra sasany amin'izao tontolo izao izay misy bilaogera vitsivitsy. Ahafahantsika manitatra ny habetsaka sy ny kalitaon'ny vaovao avoakantsika maimaimpoana ho an'ny olona mila izany ny fanomezana avy amin'ny Reuters.
Faly indrindra izahay noho ny fifandraisana satria mahita fomba lehibe hanampiana ny Reuters – sy ny fiarahamonina media manerantany manontolo – mba hahatakatra bebe kokoa momba ny fibilaogina sy ny fiantraikan'ny Mediam-bahoaka eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety. Mino izahay fa ny torohay, ny hevitra sy ny fomba fijery zarain'ireo bilaogera dia mameno ny asa fanaovan-gazety mahazatra ary ny bilaogera sy ny mpanao gazety dia afaka miara-miasa mba hanome antsika sary mazava kokoa sy mahasolo-tena kokoa an'ireo zava-mitranga sy hevitra manerana izao tontolo izao.
Afaka mahita sahady ny sasany amin'ireo vokatry ny asantsika ianao. Niara-niasa tamin'ny Reuters ny Global Voices tamin'ny lanonana vao haingana Iraq Newsmaker, izay nandraisan'ireo bilaogera avy any Afovoany Atsinanana anjara tamin'ny valan-dresaka tao New York tamin'ny alàlan'ny lahatsary mivantana sy IRC [karajia], ka nanangana fanontaniana sarotra tamin'ireo mpanao gazety raha tsy mitongilana ny filazam-baovao ataon'i Iraka. Atsy ho atsy, dia hahita votoaty avy amin'ireo mpamoaka lahatsoratra sy mpandray anjara ato amin'ny Global Voices hipoitra ao amin'ny tranokalan'ny Reuters ianao, manome vaovao sy votoaty fanampiny amin'ny tantara sasany ao amin'ny Reuters.
Ny Global Voices no tontosa dia noho ny fahalalahan-tànan'ny vondrona roa: ireo tonian-dahatsoratra sy ireo mpandray anjara ao amin'ny tranonkala, ary ireo mpanohana izay mampisy ny tranonkala. Feno fankasitrahana amin'ireo izay nampisy ny Global Voices izahay hatramin'izao ary misaotra ny Reuters mampisy izany ho anay mba hahatonga ny tranonkala ho tsara kokoa hatrany.